माेटरसाइकल पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने : सुरक्षा चिन्ता कि कमिसनको खेल ? | mulkhabar.com
May 20, 2019 | 7:32 am 45 Hits
काठमाडौँ, ६ जेठ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा हुने मोटरसाइकल र स्कुटर दुर्घटनामा पछाडि सिटमा बस्ने यात्रुको मृत्यु अस्वाभाविक ढङ्गले बढेपछि दुईवटा हेलमेटको प्रयोग अनिवार्य गरिने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागसँगको छलफलपछि पछाडि बस्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर सङ्गठन (आईएसओ )बाट प्रमाणित चिह्न भएको हेलमेट लगाउन अनिवार्य गर्ने तयारी भइरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त पन्तले मानवीय क्षति रोक्न सवारी ऐन संशोधन गरी छ महिनाभित्र दुईवटा हेलमेट प्रयोगमा अनिवार्य गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । यो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा उपत्यकामा छ हजार नौसय ८२ सवारी दुर्घटना भएका छन् ।
ती दुर्घटनामा परी दुईसय ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । महाशाखाका अनुसार, दुर्घटनामा परी मर्नेहरूमा ९५ जना मोटरसाइकल र स्कुटरको पछाडि बस्नेहरू छन् भने ७७ जना पैदलयात्रु छन् । महाशाखा प्रमुख पन्तले भन्नुभयो–दुर्घटना भए पनि हेलमेटले सुरक्षित बनाउँछ ।
देशभर ३२ लाख ५० हजार ४२ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये उपत्यकामा मात्र ११ लाख ८४ हजार सवारी सञ्चालनमा छन् । महाशाखाका अनुसार, नौ लाख २१ हजार मोटरसाइकल र स्कुटर रहेका छन् ।
मोटरसाइकल र स्कुटर दुर्घटनामा चालक जोगिने, पछाडिको व्यक्ति हुत्तिएर पछारिने भएका कारण टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्दा मृत्यु हुने गरेको विज्ञहरू संलग्न प्रहरीको एक अध्ययनले पुष्टि गरेको महाशाखा प्रमुख पन्तले बताउनुभयो ।
उपत्यकामा बिहान १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ । त्यसपछि साँझ ६ देखि १२ बजेसम्म हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन, बायाँबाट ओभरटेक र तीब्र गति दुर्घटनाको मुख्य कारण हुन् ।
यो दुई महिनाको अवधिमा दुईहजार ७५ सवारी साधनको प्रदूषण मापन गर्दा एक हजार १२७ साधनको प्रदूषण फेल भएका छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना ‘कार्यान्वयन र उपलब्धिका’ विषयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाशाखाका प्रमुख पन्तले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको करीव दुईहजार १४ किलोमिटर सडकमा दैनिक ११ लाख ८४ हजार सवारी गुड्ने गरेका छन् । सडकको अभाव र सवारी साधनको बढ्दो चापका कारण जामका अतिरिक्त दुर्घटना बढ्दै गएको भनाई महाशाखाको छ ।
गत फागुन÷चैतबाट सञ्चालनमा आएको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना–२०७५ ले सडक अण्डरपास तथा करिडोर सञ्चालनमा ल्याएपछि सवारी जाम घटेको जानकारी त्यस अवसरमा दिएको हो ।
महानगरपालिका बस्ने ९० प्रतिशत चालक सवारी साधनको अवस्था र ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्ने विषयमा जानेर हो नजानेर जिम्मेवार नहुने गरेको पाइएको छ । आफ्नो कारणले भन्दा अन्यका कारण दुर्घटना बढी हुने गरेको गुनासो सर्वसाधारणको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरि सवारी चलाए वापत एकसय नौ महिला सहित २६ हजार पाँचसय ९८ जनालाई कारवाही गरिएको छ । सवारी प्रदूषण नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन थप दुई उपकरण प्रयोग गरी प्रदूषण मापन कार्यलाई तिब्र पारिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तैं, लेन अनुशासन उलङ्घन गर्ने १३ हजार पाँचसय नौ महिला सहित ३३ हजार ३७७ जना चालकलाई कारवाही गरिएको छ । हर्न निषेधमा १२ हजार २७१ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् ।
प्रविधिमैंत्री ट्राफिक प्रहरी सर्भिलेन्स अभियान अन्तरगत सीसी टिभीको सहयोगमा पाँच हजार ६० सवारी चालक, सर्भिलेन्स भ्यान सेवाबाट ९५५ गरी छ हजार ५५ सवारी चालक कारवाहीमा परेका छन् ।
सो प्रविधिको प्रयोगले ट्राफिक नियमको उलङ्घन गर्ने चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले नै फोन गरी कारवाहीको खवर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ट्राफिक नियमको पालना तथा दुर्घटना नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले सडक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो अभियान अन्तरगत २० हजार चालकलाई सचेतना कार्यक्रममा समेटिएको महाशाखा प्रमुख पन्तले जानकारी दिनुभयो । उहाँले फुटपाथ पार्किङ, ट्याक्सीले आफूखुशी भाडा उठाउने कार्य र प्रहरीलाई घुस दिने चालक विरुद्धको कारवाही सशक्त पारिएको बताउनुभयो ।
यसअघि पनि पटक पटक याे व्यवस्था लागू गरिँदै छाड्दै गरेकोमा फेरि साे नियम लागू गर्नुलाई कतिपयले हेलमेट कम्पनी सँग मिलेर कमिसनको खेल हुन सक्ने अाशंका पनि गरेका छन् ।
Print थप समाचार
‘गुटको होइन कांग्रेसको नेता भएर आऊ’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा
कुन कार्यालय कहाँ ? सेवाग्राही नै अन्योल
गणतन्त्र स्मारकमा संविधान अङ्कित मूर्ति
समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासो
गणतन्त्र दिवस भव्यतापूर्वक मनाउन तयारी
लघुकथासङ्ग्रह ‘घाम’ लोकार्पित
प्रहरी निरीक्षक पदमा पदोन्नति भएकाहरुलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
काठमाडौं, २२ बैशाख । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले गैरव्यवसायिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने चेतावनी दिएका छन्…
विमला अधिकारी, १९ बैशाख, लमजुङ । लमजुङमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विभिन्न खालका ट्राफिक नियम उलंघन गर्ने सवारीमाथि गरिएको…
अब घटना भएलगत्तै प्रहरी आइपुग्ने : एक चौकीलाई एक मोटरसाइकल
समायोजनमा जाने प्रहरीलाई विशेष सुविधाकाे प्रस्ताव
ट्राफिक प्रहरीलाई अायाे खुशीकाे खबर : गृहले गर्याे ३५ % भत्ताको प्रस्ताव